गायिका ज्योति मगर पहिलो पटक मिडियामा, २ छोराको आमा बनेकि पो रहेछिन्! खुल्यो ६ वर्षदेखिको यस्तो सम्बन्ध (भिडियोसहित) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > गायिका ज्योति मगर पहिलो पटक मिडियामा, २ छोराको आमा बनेकि पो रहेछिन्! खुल्यो ६ वर्षदेखिको यस्तो सम्बन्ध (भिडियोसहित)
admin July 5, 2019 भिडियो, मनोरञ्जन	0
काठमाडौं–गायिका ज्योति मगर गीत–संगीतको क्षेत्रमा मात्रै नभएर मोड्लिङको क्षेत्रमा पनि उतिकै चर्चित छिन् । उनी गीत संगीतले मात्रै होइन बेला बेलामा उनले लगाउने पहिरन र प्रस्तुतिले समेत विवादमा आइरहन्छिन् । धेरैलाई कौतुहल्ता पनि हुनसक्छ ज्याति मगर विवाहित हुन् या अविवाहित रु गायिका मगर सुत्र टिभीसँगको एक अन्तरवार्तामा संगीतकार तथा म्युजिक एरेञ्जर, गितारिष्ट विशाल गुुरुङसँग सँगै सार्वजनिक भएकी थिईन् ।
उक्त अन्तरवार्तामा दुबैजनाको प्रस्तुति हेर्दा केही सोंच्न पर्ने अवस्था समेत देखिन्थ्यो । दुुबैजना म्युजिक क्षेत्रसँग आवद्ध भएको र कुनै दिन उनीहरु विवाह बन्धनमा बाँधिन पनि सक्ने दुुबैले स्वीकार समेत गरे । गायिका मगरले आफूहरुलाई कसैले जोडीको रुपमा परिचय दिए पनि अफ्ठेरो नमान्ने बताएकी छिन् । उनले विशाल गुरुङसँगको सहकार्यमा पछिल्लो एल्वम ‘जाले रुमाल’ बजारमा लिएर आएको पनि जानकारी गराईन् । लामो समयदेखि म्युजिकमा सहकार्य गर्दै आएकी ज्योतिले विशालसँग विहे हुनसक्नेतर्फ पनि संकेत गर्न पुुगेकी थिईन् ।
उनीहरु गएको ६ वर्षदेखि निरन्तर संगीत क्षेत्रमा खसहकार्य गर्दै आएका छन् । कार्यक्रममा ज्योति र विशाल दुबैजनाले एक अर्काको तारिफ पनि मज्जाले गर्न भ्याए । ज्योतिले विशालको ‘ह्याण्सम पन’ को खुलेर प्रशंसा गरिन भने विशालले पनि ज्योतिको ‘ट्यालेन्ट’ पनको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए । ज्योति र विशालको दोस्ती यति नजिकको देखियो कि उनीहरुले सम्बन्ध तँ तँ र म म सम्म ओर्लिएपछि उनीहरुको सम्बन्धमा माया प्रेम नै पो छ कि भनेर अनुमान लाउन समेत सकिन्थ्यो ।
प्रचण्डले बाबुरामलाइ फकाउँदै भनेः सम्मान दिदा आउनुहुन्छ त?
श्रीमान् विदेशमा, नेपालमा २९ बर्षिय रिनाकाे रक्सीको नशाले लियो ज्यान् – भिडियो सहित
pathivaraonline.com is an online Blog which index online videos to watch online in an easier accessible manner. This site doesn’t host any content on it own server and just linking to content that was uploaded to popular Online Video hosting sites like dailymmotion.com, Youtube.com, video.google.com, ZShare.net, megavideo.com and such sites. any Violation please inform us at [email protected]thivaraonline.com